▷ IArcana enkulu-eyona njongo iyinyani Tutarotgratis.I-intanethi
1 Intsingiselo ye-Major Arcana yamakhadi e-tarot
2 Ithetha ntoni ikhadi elikhulu leArcana kufundo lwekhadi?
3 Ithetha ntoni xa ukufundwa kweTarot ubukhulu becala kungamakhadi ama-Arcana?
4 Zithini iiArcana ezinkulu kwiTarot?
Intsingiselo ye-Major Arcana yamakhadi e-tarot
Las amakhadi e-tarot de UMajor Arcana umele izifundo zobomi, iimpembelelo ze-karmic kunye neengqungquthela ezinkulu ze-archetypal ezichaphazela ubomi bakho kunye nohambo lomphefumlo wakho ekukhanyeni.
Los Iintsingiselo zamakhadi amakhulu eArcana anzulu kwaye anzima - La makhadi eTarot ngenene zimele ubume bolwazi lomntu kwaye ziqulathe izitshixo zezifundo zobomi ezihanjisiweyo ukutyhubela iinkulungwane.
Ikwabizwa ngokuba yi Amakhadi anciphisiweyo, amakhadi e-Major Arcana zibandakanya amakhadi angama-21 kunye neleta enye engenakubalwa (Uphambene). Isidenge ngoyena mntu uphambili kwi-Arcana enkulu kwaye wenza uhambo lwakhe ngetshathi nganye, ahlangane nootitshala abatsha kwaye afunde izifundo zobomi ezintsha apha endleleni, ekugqibeleni afikelele kuvuthondaba lohambo lwakhe noMqulu weHlabathi. Oku kwaziwa ngokuba luhambo lwesidenge kwaye kuyindlela eluncedo yokuqonda umxholo wamakhadi eTarot eMajor Arcana.
Ithetha ntoni ikhadi elikhulu leArcana kufundo lwekhadi?
Xa ubona ileta evela UMajor Arcana kufundo lweTarotuyabizwa Cinga ngezifundo zobomi kunye nemiba enamava ngoku. Elinye ikhadi elivela kwi-Major Arcana lihlala liseta indawo yokufundwa kweTarot, kunye namanye amakhadi ahambelana nentsingiselo enkulu ye-Arcana.
Ithetha ntoni xa ukufundwa kweTarot ubukhulu becala kungamakhadi ama-Arcana?
Xa ukufundwa kweTarot kusenziwa ikakhulu ngamakhadi amakhulu eArcana, ukhona ukufumana imicimbi etshintsha ubomi eya kuba neziphumo zexesha elide. Kukho izifundo ezibalulekileyo ekufuneka uzithathele ingqalelo ukuze uqhubele phambili kwimfuno yakho yokomoya kunye neyakho.
Nangona kunjalo, ukuba uninzi lwamakhadi eTarot eMajor Arcana ajikile, inokuba luphawu lokuba awuhlawuli ngokwaneleyo ezi zifundo zibalulekileyo zobomi kwaye kufuneka usazi kakuhle isifundo ngaphambi kokuba uqhubeke.
Zithini iiArcana ezinkulu kwiTarot?
[iarbital_cluster tags = »i-16 ″ order =» i-ASC »iphepha lephepha =» 26 ″]